नगर प्रमुखमा पाँचखालमा काँग्रेस विजयी » खबरहरुको एउटै केन्द्र
नगर प्रमुखमा पाँचखालमा काँग्रेस विजयी
शुक्रबार, जेष्ठ ५, २०७४ ०९:३२ मा प्रकाशित !
त्यसैगरी, मण्डन देउपुर नगरपालिका–९ मा एमालेको पूरै समूह विजयी भएको छ । एमालेबाट वडाध्यक्षमा जितबहादुर तामाङ ७९३ मत ल्याई विजयी हुनुभएको छ । उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका सीताराम श्रेष्ठले ७२५ मत ल्याउनुभयो ।
PREVIOUS POST Previous post: नगर प्रमुखमा बनेपामा एमाले विजयी
NEXT POST Next post: गोली प्रहार गरी भरतपुरमा लुटपाट
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, जेष्ठ ५, २०७४ ०९:३२
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, जेष्ठ ५, २०७४ ०९:३२
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, जेष्ठ ५, २०७४ ०९:३२
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, जेष्ठ ५, २०७४ ०९:३२
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, जेष्ठ ५, २०७४ ०९:३२